Warar - Farqiga u dhexeeya nooca yareynta biyaha polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta salka
Warshado isku dhafan oo la taaban karo oo fara badan ayaa leh labada nooc ee yareynta nooca polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta hoos udhaca, laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya isticmaalka iyaga?
Marka sheygaaga la taaban karo sida sibidhka, isku-darka iyo ciidda uu kufiican yahay, kaliya nooca yareynta nooca polycarboxylate superplasticizer ayaa kuu hagaagi doona adiga. Nooca haynta slump ayaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo la qabsashada la taaban karo.waxay saameyn toos ah ku leedahay haynta sagxadda la taaban karo. aad u fiican, ama marka aad waxqabadka hoose ee la taaban karo uusan fiicnayn, markaa waa inaad ku dartaa nooca haynta sicirka, saamiga u dhexeeya nooca yareynta biyaha iyo nooca haynta salka inta badan waa 8: 2 ama 7: 3.
Waxaa laga yaabaa inaad dareemi karto qiimaha udhaxeeya nooca yareynta polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta dhoobada waa isku mid warshadaha qaar, laakiin qiimaha haynta nooca hoos udhaca ayaa aad uga sareyn doonta nooca yareynta biyaha. Taasi waa sababta oo ah warshadaha qaar, sii haynta polycarboxylate superplasticizer waa ku dhowaad isku walxo sida nooca yareynta biyaha.laakiin warshadaha qaar, pice haynta nooca pce waxay leedahay cunsurro gebi ahaanba ka duwan sida yareynta biyaha. farqigaani wuxuu muujinayaa waxqabadka la taaban karo waa nooca haynta sicirka qaaliga ah wuxuu leeyahay saameyn aad u sareysa oo haynta ah. wax saameyn biyo yareyn ah ma leh.
Gabagabo ahaan, waa inaan doorano polycarboxylate superplasticizer sida ku cad sheydeena la taaban karo. Sidan oo kale, muunada superplasticizer polycarboxylate waa mid aad muhiim u ah kahor dalabka.